Sky Bagan | FAQ
With your Business Email Hosting, you can use any desktop-based email client such as Webmail Direct/ Gmail / Outlook / Mozilla / Windows Mail, etc. We haveaguide that will help you configure different email clients.
You can use the URL: https://yourdomainname.com/webmail to access your Webmail account. On the login page, just enter your email address and password.
By default, the POP3 protocol works on two ports: Port 110 – this is the default POP3 non-encrypted port; Port 995 – this is the port you need to use if you want to connect using POP3 securely. By default, the IMAP protocol works on two ports: Port 143 – this is the default IMAP non-encrypted port; Port 993 – this is the port you need to use if you want to connect using IMAP securely. By default, the SMTP protocol works on three ports: Port 25 – this is the default SMTP non-encrypted port; Port 2525 – this port is opened on all SiteGround servers in case port 25 is filtered (by your ISP for example) and you want to send non-encrypted emails with SMTP; Port 465 – this is the port used if you want to send messages using SMTP securely.
Domain Name ဆိုတာ ဘာလဲ?
ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှ အင်တာနက်လိပ်စာ၊ ဝက်ဆိုက်ဒ်လိပ်စာ (Domain Name) တွေကို အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) အင်တာနက်နာမည်တွေနဲ့ ကိန်းဂဏန်း၊ နံပါတ်တွေကို စီမံအုပ်ချုပ် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အင်တာနက်အဖွဲ့စည်းတစ်ခုမှာ မှတ်ပုံတင်ရပါတယ်။ Domain Name ရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေလည်း ICANN ရဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံနှုန်းအရပဲ ရောင်းရပြီး တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဈေးနှုန်းမတူတဲ့ Domain Name ရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ လူသိများ၊ အသုံးများတဲ့ Domain Name Extension များ ဥပမာ (.com, .net, .info, .org, .me, .pro, .co, etc...) တွေကို Top-Level Domains (TLDs) ( or) Generic Top-Level Domains (gTLDs) လို့ ခေါ်ပါတယ်။ နိုင်ငံနာမည် Domain Name Extension ‌များ ဥပမာ (မြန်မာ Domain Name Extension ဖြစ်တဲ့ .mm, အိန္ဒြိယ .in, တရုတ် .cn, အမေရိကန် .us, အင်္ဂလန် .uk, စင်ကာပူ .sg, ထိုင်း .th, etc...) ‌တွေကို Country Code Top-Level Domains (ccTLDs) လို့ခေါ်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်ဝယ်ချင်တဲ့ Domain Name (ဥပမာ - myanmarstore.com) က ဝယ်လို့မရတော့ဘူးဆိုရင် .com အစား myanmarstore.net, .org, .info တစ်ခုခုနဲ့ ဝယ်လို့ရတယ်။ .com ပါတာပဲ လိုချင်တယ်ဆိုရင် မြန်မာ Domain ဖြစ်တဲ့ myanmarstore.com.mm ကို ပို့ဆောင်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အစိုးရကခွင့်ပြုထားပြီး .com.mm ရောင်းတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေမှာ ဝယ်လို့ရတယ်။ (.com, .net, .info)တွေ မကြိုက်လို့ နောက်တစ်ခု ပြောင်းရွေးမယ်ဆိုရင် Store နဲ့ ဆိုင်တာဖြစ်လို့ myanmar.store ကို ရွေးဝယ်လို့ရတယ်။ သင်က အိုင်တီသမားဆိုရင် .it (အီတလီနိုင်ငံ code name), ဒီဇိုင်နာဆိုရင် .design, ဓာတ်ပုံဆရာဆိုရင် . photo, . photographer, ပရိုဂရမ်မာဆိုရင် .dev, .codes, . program, အင်ဂျင်နီယာဆိုရင် .engineer/engineering, ဆရာဝန်ဆိုရင် .doctor, သွားဆရာဝန်ဆိုရင် .dentist/dental အစရှိသဖြင့် ကိုယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ TLDs Domain Name ပေါင်း 1000+ ရှိတဲ့ extension တွေကို ရွေးဝယ်လိုရပါတယ်။
Domain ဝယ်ရင် ကိုယ်ပိုင် သိမ်းထားလို့ရလား?
Domain Name တွေကို နှစ်စဥ်အလိုက် ဝယ်ရပါတယ်။ ဝယ်ထားတဲ့ နှစ်အတွင်းမှာ ကိုယ်ပိုင် Domain Name ဖြစ်ပါတယ်။ Sky Bagan မှ ရောင်းချသည့် Domain Name များသည် Domain ကို ကြိုက်သလို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ DCP (Domain Control Panel) ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Domain သို့မဟုတ် Hosting ကို တစ်ခြားကုမ္ပဏီကနေ ဝယ်ပြီး Sky Bagan ရဲ့ Domain သို့မဟုတ် Hosting ကို ချိတ်လို့ရလား?
တစ်ခြားကုမ္ပဏီကနေ Domain Name ဖြစ်ဖြစ်၊ Email ဖြစ်ဖြစ်၊ Hosting ဖြစ်ဖြစ်၊ Sky Bagan ရဲ့ Domain, Hosting နဲ့ ချိတ်ပေးလို့ရပါတယ်။ ချိတ်ချင်တဲ့ Name Server သို့မဟုတ် Record တွေကို ပို့ပေးရပါမယ်။ ကိုယ်တိုင် မပြုလုပ်တတ်ရင် Sky Bagan နည်းပညာအဖွဲ့မှ အခမဲ့ ကူညီပေးပါတယ်။